एभिन्युज टेलिभिजनजनकपुर बजारमा कारबाइड हालिएको आँप, सावधानी नअपनाइए गम्भिर विमारी हुन सक्ने चिकित्सकहरुको चेतावनी - एभिन्युज टेलिभिजन
जनकपुर बजारमा कारबाइड हालिएको आँप, सावधानी नअपनाइए गम्भिर विमारी हुन सक्ने चिकित्सकहरुको चेतावनी
3 Jestha 2075 Thursday 10:27 pm प्रतिकृया दिनुहोस
जनकपुरधाम । पाकेको आँपको मौसम आउनुभन्दा अगावै जनकपुर बजारमा रसायन हालेर पकाइएका आँप देखिन थालिएको छ । जनकपुरक्षेत्रमा उत्पादन हुने आँप पाक्ने सिजन शुरु नभएका कारण अहिले बजारमा पाइएका आँप सबै भारतबाट ल्याइएका व्यापारीहरु बताउँछन् । काँचो आँपमा रसायन हालेर पकाइन्छ र सो रसायन शरीरका लागि हानिकारक हुन्छ ।
यो रसायनलाई त्यसैले विषादी भनिएको हो । रसायन वा विषादी हालेर पकाइएका आँपहरु खान नहुने चिकित्सकहरुले सुझाव दिदा पनि उपभोक्ताहरु चाख मानी खाईरहेका छन ।
आँप पकाउन क्याल्सियम कारबाइड नामको रसायन प्रयोग गरिन्छ । जसले मुटुरोग निम्त्याउन सक्ने तथा कलेजो र मष्तिष्कमा समेत असर गर्ने जनकपुरका बरिष्ठ चिकित्सक डा. विजय कुमार सिंहले बताउनु भयो ।
उहाँले रसायन हालेर पकाएको फलफुलका कारण टाउको दुख्ने, रिंगाटा लाग्ने, निद्रा लाग्ने, मूड फेरिने, मानसिक दुबिधा हुने लक्षणहरु देखिने गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सेरेब्रम भन्ने दिमागको भागमा पानी जम्ने र पक्षघात समेत हुने सम्भावना हुने गरेको प्रति पनि चिकित्सकहरु सचेत गराई रहेका छन । विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओले खाद्यान्न सम्बन्धि कुरामा यसको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
तर जनकपुरमा मात्र नभई नेपाल भरिनै यसको खुल्ला रुपमा प्रयोग भईरहेको छ । बजारमा आँप आएसंगै रोगीहरुको संख्या पनि बढेको डा. सिंहले स्वीकार गर्नुभयो ।
जनकपुरका व्यवसायीहरुका अनुसार जनकपुरमा मात्रै यस्ता कारबाइड हालेको आँप दिनहुँ आधी ट्रक खपत भईरहेको छ ।
आँप उत्पादन गर्ने किसान र व्यापारीले यतिबेला खुलेआम कारबाइड हालेको आँप बिक्री गर्दा पनि कारबाही गर्ने निकायले गम्भिरता देखाई रहेको छैन ।
कारबाइडमा रहेको कार्बनडाअक्साईड र हाईड्रोजनले अक्सिजनको मात्रालाई सोसेर २४ घण्टामै आँपलाई पकाइदिन्छ ।
उनीहरुले आँपलाई टिपेर बोरामा पोको पारी पकाउने, बढी तापक्रममा राखेर पकाउने तथा विभिन्न विषादीहरुको प्रयोग गरी पकाएर बजार पठाउने गर्छन् ।
कृत्रिम तरिकाले पकाइएको आँपमा किराको वृद्धि छिटो हुने र यस्तो आँप खाँदा शरीरमा गडबढी आउने चिकित्सकहरु बताउँछन ।
स्थानीय वासीहरुले मानविय अहित हुने यस्ता फललाई तत्काल रोक्न माँग गरेका छन ।
आँपहरुमा इथाइलिन अक्साईड जस्ता नेचुरल प्लान्ट हर्मोनको प्रयोग गरी पकाईएको छ भने यसले मानव शरीरमा खासै असर गर्दैन पनि चिकित्सकहरुले सल्लाह दिने गर्छन । यसरी पकाउँदा विषादीको मात्रा न्यून रहन्छ । तर स्वादमा भने केहि कमी हुने गरेको छ ।
विज्ञहरुको भनाई अनुसार आँपमा हाम्रो शरीरलाई चाहिने धेरै प्रकारका तत्वहरु हुन्छन् ।
विभिन्न खनीजहरु, भिटामिन ए, भिटामिन बी, भिटामिन ई लगायतका पहेंला फलफूलमा पाईने लगभग सबै प्रकारका तत्वहरु आँपमा पाईन्छन् ।
त्यस कारण बिना कारबाइड हाली पकाइएको आँपलाई सबैलाई खान चिकित्सकहरुले सल्लाह दिने गरेका छन ।